ပုံတွေ အများကြီး တင်ဖို့ ရှိပေမဲ့ လိုင်း အဆင်မပြေတော့လို့ ဒီလောက်နဲ့သာ ကျေနပ်လိုက်ပါတော့။ နောက်မှ ထပ်တင်ပေးပါ့မယ်။
အဖွားဂျီး ၊ ညီးကော သွားတုန်းက ဝတ်ခဲ့ရသေးလား
ဝင်ကြေး က တစ်ယောက်ဘယ်လောက်တဲ့တုန်း
၃ဝနှစ်အောက် ဆိုရင် အခမဲ့တဲ့လား….
ဦးလေး ပြောင်ကြီး.. ဝင်တဲ့ လူတိုင်း သူတို့ ပေးတဲ့ အနွေးထည် ကို ဝတ်ကြရတယ်။ ဆူး လည်း ဝတ်ရတာပေါ့။
အသက် ၃ဝ အောက် အခမဲ့ ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲပေါ့။
အဖေမှာမှာတဲ့အတိုင်းချည်း ဘဲ ….
မဟာဒဒိုင်း ဒွေ လုပ်နေသလဲကွယ်….
ဘီရုမာမှုပြုပြီး ..ကျုံးတွေ နန်းမြင့်မျှော်ဇင်တွေ ခံတပ် ဆောက်ပစ်ရမှာ…
ခပ်ထူထူ ချီးနား ကန်ပနီ ပဲထင်ပါတယ်…
မန်း က နန်းတော် မုခ်ဦး ပါတယ်။ အရှေ့မှာ ခြင်္သေ့ နှစ်ကောင် ရှိတယ်။
လူတွေ စည်ကားနေလို့ ခြင်္သေ့ တစ်ကောင်ပဲ ပါတယ်။
တလုပ်ပြည်က လာလုပ်ပေးတာဆိုတော့ ပိုင်နိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ရာ ဖြစ်မှာပေါ့..
တလုပ်မလေးတွေ ပုံကျတော့ ချောတယ်။
အနှုတ် ၁ဝ လောက်ဒေသမှာ အကြာကြီးနေခဲ့ဖူးလို့ သွားမကြည့်တော့ဘူး … အေးတဲ့အရသာကို မုန်းလောက်အောင် ခံစားခဲ့ရပြီးပြီ …
တော်တော် အေးတယ်။ ကြာကြာ မနေနိုင်ဘူး။
ပြန်ထွက်ပြီး ပြန်ဝင်လို့ ရဘူး.. နောက်ထပ် ၅၀၀ဝ ပြန်ပေးရမှာ..
သေချာတာကတော့ လက်မှတ်က နံပါတ်စဉ်မှာတော့ ၄၀၀ဝ နားကပ်နေပြီ။ အချိန်အနေအထားနဲ့ဆိုရင်တော့ လူ ၄၀၀ဝ ကျော် သွားပါလိမ့်မယ်။
၅၀၀ဝ နဲ့ အယောက် ၄၀၀ဝ ဆိုတော့ သိန်း ၂၀ဝ ကတော့ သေချာ နေပြီ။
ပထမပိုင်း ရက်တွေမှာပဲ အရင်းတော်တော် ပြန်ရလိမ့်မယ် ထင်တယ်။
တခါရောက်ပြီးရင်တော့ နောက်ထပ် သွားဖို့ စိတ်ကူး သိပ်ရှိကြမယ် မထင်ဘူး။
တကယ်တော့ မြန်မာပြည်က လူတွေ အနေနဲ့ ရေခဲ ဆိုတာ သိပ်အများကြီး မြင်ဖူးတာ မဟုတ်တော့ ရေခဲ နဲ့ အရုပ်လုပ်တယ် ဆိုတာ မြင်ရခဲတဲ့ မြင်ကွင်းပါပဲ။
မမြင်ဖူးတဲ့ သူတွေကတော့ အမြင်ကျယ်အောင် သွားတော့ ကြည့်သင့်တယ် ထင်တယ်။
လက်တွေ ့ကို သွားပြီး ရိုက်လာတာ..ဘဲထီးဂွတ်ပဲ
နောက်ခါ ဒိုးရင် များအတွက် ဘီအီးနဲ့ရောကစ်ဖို ့ရေခဲ တစ်ဖဲ့လောက် ဖဲ့ခဲ့စမ်းဘာဦး..
ဒီနေ့မှ သွားရင်တော့ ၄၀၀ဝ ပဲ ပေးရမှာ.. အလောတကြီး လူစုံလို့ သွားလိုက်ကြတာပါ။
ရေခဲ မဖဲ့အားဘူး.. အေးလွန်းလို့ အမြန် ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။
တခြားနိုင်ငံတွေမှာက ရေခဲထဲ ဝင်ခိုင်းရင် ဖိနပ်ပေးတယ်။ သူက ဖိနပ် မပေးတော့ တော်တော် အဆင်မပြေဘူး။ ခြေဖျားတွေ အေးစက်ပြီး မနေနိုင်တော့ဘူး။
ဒို့များတော့ အဆုတ် အားနည်းတယ် အအေးမိမှာစိုးလို့ သွားတော့ဘူး
ဓါတ်ပုံလေး ကိုကြည့်ပီး ကျေနပ် လိုက်တော့မယ်
အဝင်မှာ ကိုယ်ဝန်သည် နဲ့ နှလုံးစက်တပ်သူများ ဝင်ခွင့်မရှိပါလို့ ဆိုင်းဘုတ် ထပ်ထားတာတော့ ရှိတယ်။
ရင်ကျပ်ရှိရင်တော့ အသက်ရှု မဝ ဖြစ်နေအုန်းမယ်။
ဦးဦးဖျားဖျား ဓါတ်ပုံတွေမြင်ရတာ … အရမ်းကောင်းတာပဲ …. ။
နောက်တစ်ပတ်သွားဦးမှပဲ …. ။ အရမ်းအေးတယ်သာပြောတယ် .. သူတို့ ဌားပေးတဲ့ အကျီ င်္တွေက … စက်ရုံမှာ … spring အတွက်လောက်ပဲ ထုတ်တဲ့ အပါးအမျိုးစားလေးတွေ … ။ အအေးဒဏ်ကို တကယ်ခံနိုင်ပါ့မလား … သိချင်မိတယ် … ။
ညီမရေ.. ပိတ်ရက် မသွားနဲ့ ၁ထောင်ပိုပေးရတယ်။
ကြားရက်က ၄၀၀ဝ ပဲ ပေးရမှာ.. ၂ယောက်သွားရင် ပိုတဲ့ ၂၀၀ဝ ကို မုန့်စားလို့ ရတယ်။
ည၉နာရီ အထိ ဖွင့်တာဆိုတော့ အလုပ်ပြန်ချိန်ဝင်လည်ကြည့်ပေါ့။
အထဲမှာလည်း ဘယ်လောက်မှ ကြာကြာ မှ မနေနိုင်တာ ပိတ်ခါနီး သွားလည်း ရတယ်။
သွားရင်တော့ လက်အိတ်တို့ ရှူးဖိနပ်တို့ ဘာတို့ စီးသွားရင် ပို အဆင်ပြေမယ်။
ဒီလောက် ပူနေတဲ့ ရာသီဥတုကြီးထဲမှာ
ဒီလောက်အေးတာကြီးလုပ်ထားတာ အန္တရာယ် ရှိမယ်ထင်တယ် ဒေါ်ဆူးရေ။
ပုံလေးတွေ ရိုက်လာခဲ့ပေးတာ ကြည့်ပြီးပဲ
အင်း ဟုတ်တယ် အပြင်ပြန်ထွက်ရင် နည်းနည်းများရှော့ဖြစ်သွားမလားပဲ ။ အရမ်းပူတဲ့ အချိန်ဆိုရင် ပြောတာပါ။ အသက်ကြီးတဲ့ ဘဘဘလက်ဆို ပိုတောင် သတိထားသင့်တယ်။
ရန်ကုန်မှာ ဒီတိုင်းကို နေ့လည်ဘက် အပြင်ထွက်ရင် အရမ်းပူနေပြီ။
အသားတွေကို စပ်နေတာပဲ နေက အရမ်းပြင်းတယ်။
ဆူး က ညဘက်သွားတာပါ။ ညရနာရီလောက် ရောက်ပြီး လည်ပတ်ပြီး ပြန်ထွက်လာတော့ ရခွဲပဲ ရှိသေးတယ်။
နေအေးတဲ့ အချိန်ပဲ သွားသင့်တယ် ည၉နာရီ အထိ ဖွင့်တာပဲဆိုတော့ ပြသနာ မရှိဘူး ထင်တယ်။ အပူအအေး အရမ်းပြောင်းတာ ပြသနာတော့ ရှိတယ်။
သွားမယ် သွားမယ်နဲ့ အခုထိ မသွားရသေးဘူး
ဒါပင်မယ့် အခု ဆူးပြောလို့ ကြားရက်ပဲ သွားတော့မယ်
2000 သက်သာနည်းသလား မုန့်စားလိုု့ရတယ် ကျေးဇူးပါ ဆူးရေ
အခုတော့ ပုံလေးတွေ အရင်ကြည့်သွားပါတယ် ……………
ညနေ အလုပ်ဆင်းတဲ့ အချိန်သွားလိုက်ရင် အလုပ်လည်း မပျက်ဘူး။
ပုံတွေ အားပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အမယ်အမယ် လက်ဦးသွားတယ်ပေါ့ မမဆူး ……… သွားမယ်ကြံကာရှိသေးတယ်.. ဘယ်လိုလဲ ကိုကိုနဲ.သွားတာလား..
အမေ နဲ့ သွားတာပါ.. သမီးလိမ်မာလေးပါ မိရွှေတိုက်ရယ်..
တစ်ခေါက်လောက်တော့ သွားလည် အုံမှ.. ည ၉ နာရီ မှ ပိတ်တာဆိုတော့. ရုံးဆင်းချိန် အဆင်ပြေတာပေါ့..။ ဒါနဲ ကင်မရာ ယူသွားလို့ရလားဟင်..။ ကင်မရာခွန်ပေးရသေးလား..။
ကင်မရာ အခွန်မပေးရဘူး။ ကင်မရာ ကိုင်ပြီး ရိုက်ရင်းနဲ့ အေးလွန်းလို့ လက်ညိုးကလေးတွေ ကျင်တက်လာတယ်။ ရွာထဲမှာ လက်ဦးချင်လို့သာ ရိုက်တာ.. မဟုတ်ရင် မရိုက်ပါဘူး။
ဝတ်ချင်တာ ဝတ်ပြီး ဝင်ပေါ့.. ၅၀၀ဝ ပေးပြီး အေးလို့ ပြန်ပြေးထွက်လာပြီးမှ ပြန်ဝင်ချင်ရင် ထပ်ပေးလိုက်ပေါ့..
သူနာပြု တော့ ရှိတယ် ဆေးခန်းလေး တွေ့ခဲ့တယ်။
western park မှာ dinner မင်္ဂလာဆောင်သွားရင်နဲ့တွေ့တော့တွေ့သား သူငယ်ချင်းတွေ ကတော့ စိတ်ဝင်စားကြတယ် ဒါပေမယ့်မသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ လူများလိုက်တာမှ ကားတွေတော်တော်ပိတ်တယ်။ ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ လဲ ပွဲတွေ ရှိနေတော့အထွက်အဝင်နဲ့ဆိုတော်တော်လေး ကားပိတ်တယ်။ အဲဒါ လူတွေ မြင်တော့မှ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ လည်း စားစရာမရှိအောင်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာ တကယ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ ဂုဏ်တက်မိသား ။
ကားတွေ ပိတ်တာကတော့ တကယ်ပိတ်တယ်။ တလိမ့်ချင်းစီ တန်းစီပြီး ဝင်ရတယ်။
အမှန်တော့ မြန်မာပြည်မှာ မိသားစုတွေ အစုလိုက် အပျော်အပါး သွားစရာ သိပ်မရှိလှဘူး။
ဒီကလူတွေက အပျော်အပါး ငတ်နေသလို ဖြစ်တော့ တခုခုဆို အရမ်းစိတ်ဝင်စားပြီး သွားကြည့်ကြတာပါ။ လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်း ရေရှည် အတွက်ကြည့်ပြီး ကစားကွင်း အကြီးစားတွေ လုပ်ဖို့ ပျော်ဖို့ပါးဖို့ နေရာ သိပ်မလုပ်ကြတော့ အသစ် ဖွင့်တယ် ဆိုတာနဲ့ သွားကြည့်ကြတာပါ။
ရေခဲ လို နေရာကတော့ တစ်ခေါက်ရောက်ပြီးရင် နောက်တစ်ခေါက်တော့ သိပ်သွားကြမယ် မထင်ဘူး။
ဓတ်ပုံတွေကြည့်ရတာ အေးပါတယ် အဲလေ လှပါတယ်ဗျာ
ရေခဲပြင်စကိတ်စီးပြီး အလှပြ ကနေတာလေးတွေ မရှိဘူးလား မသိဘူး။
ရေခဲပြင် စကိတ်မတွေ့ခဲ့လို့ ကိုယ်တိုင် ပုံလဲ ပြီး ရေခဲပြင် စကိတ်က နေရတယ်။ ဟိဟိ..
ရေခဲပြင် စကိတ်ကွင်းတွေ ဘာတွေ ရှိရင်တော့ သွားပြီး ကစားချင်သား။
အောက်ကရီရင် လေးပုံမြောက်က ကောင်မလေးက
၄၃ ကားစီးတဲ့ ကောင်မလေးဖြစ်ရမယ်
မမဆူး ရဲ့ အဲသည်မှာ ကျုပ်တို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံရောမတွေ့ခဲ့ဘူးလားဗျာ။
ပေးဝတ်တဲ့အကျင်္ီတွေ၊ အနံ့ပေါင်းမစုံခင် မြန်မြန်သွားထားကြဗျို့၊
တရုတ်ပြည်က ဘုံကျောင်း တရုတ်ပြည်က ရေအောက်နဂါးမင်း တရုတ်မလေးတွေ အရုပ်ပဲ ရှိပါတယ်။ မြန်မာ အရုပ် ဖြစ်တဲ့ မန်းမြို့ရဲ့ အထင်ကရ ဖြစ်တဲ့ နန်းတော် နဲ့ ခြင်္သေ့တောင် ရုပ်က သိပ်မတူချင်ဘူး။ တရုတ်ကြီးက သူထုနေကျ ကျွမ်းကျင်တာပဲ လှတယ်လို့ ထင်တယ်။